Cinnamon (သစ်ကြံပိုးခေါက်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Cinnamon (သစ်ကြံပိုးခေါက်)
Cinnamon (သစ်ကြံပိုးခေါက်) ကဘာလဲ။
သစ်ကြံပိုးခေါက်ကို မှိုသတ်ဆေး၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အအေးမိခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ အစားသောက်ပျက်ခြင်း၊ နှင့် လေပြွန်ရောင်ခြင်းများကို ကုသရာတွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုကြသည်။
သစ်ကြံပိုးခေါက်ကို အေးပြီး ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် ထားပါ။
သစ်ကြံပိုးခေါက် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
သစ်ကြံပိုးခေါက် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
•	အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၊ လျှာ၊သွားဖုံး ရောင်ခြင်း
•	အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်း
•	ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို တုံ့ပြန်ခြင်း
သစ်ကြံပိုးခေါက် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Cinnamon. http://www.drugs.com/npc/cinnamon.html. Assessed August 7, 2016Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version.